संगीत सुन्दै मेडिटेसन गर्नुका यस्ता छन् ४ फाइदाहरु - Medianp.com
शनिबार, ०२, कार्तिक, २०७६
संगीत सुन्दै मेडिटेसन गर्नुका यस्ता छन् ४ फाइदाहरु
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००७:२१0
काठमाडौँ । संगीत र मेडिटेसन दुवैले मानसिक रुपमा आनन्द प्रदान गर्दछ । यदि हामीले यी दुवै चिज एकैसाथ गर्ने प्रयास गर्यौ भने धेरै लाभदायक हुन्छ । किनभने मेडिटेसनले मानसिक रुपमा स्वास्थ्य राख्दछ । यहाँ मानिसहरु मेडिटेसनको लागी फरक फरक तरिका अपनाउने गर्दछन् । कोही चकलेट मेडिटेसन मन पराउँछन् भने कोही योगको सहारा लिन्छन् । तर आजकालका मानिसहरु मेडिटेसन संगीत सुन्दै गर्न मन पराउँछन् । यो प्रकारको मेडिटेसन गर्दा मानिसहरु अलग अलग प्रकारको संगीत सुनेर मेडिटेसन गर्दछन् । किनभने यसो गर्दा हाम्रो मानसिक तनाव हटेर जान्छ , अनि मनमा शान्ति प्राप्त हुन्छ । त्यसैले आज हामी तपाईलाई संगीत सुन्दै मेडिटेसन गर्नुका फाइदाहरु बताउदै छौँ ।
तनाव कम गर्छ ,तनाव मानिसहरुको दिमाखमा हर्मोनल परिवर्तन हुदाँ हुन्छ । त्यो हर्मोन्समध्ये कोर्टिसोल , एंडोर्फिन ,पोलाक्टिन प्रमुख हो । त्यसैले संगीत सुन्दै मेडिटेसन गर्दा मानिसहको दिमाखको तनाव सम्बन्धि हार्मोन्सको सन्तुलन हुन्छ ।
एकदमै गहिरो तरिकाले मेडिटेसन गर्न मर्दत पुग्छ , यदि मेडिटेसन गर्दा ब्यक्ति एकतत्र भएर लागेन भने त्यो सफल मानिदैन् । त्यसैले मेडिटेसन गर्दा संगीत सुन्दै गर्यो भने त्यो समयमा मानिसको बौद्धिक क्षमता र ध्यान दिने क्षमता बढ्दछ ।
भावनात्मक रुपमा नियन्त्रण हुन्छ , जब हामी भावनात्मक रुपमा हैरान हुन्छौ,त्यसबेला हाम्रो दिमाख भावनात्मक रुपमा उथल पुथल हुन्छ ।यस्तो अवस्थामा ब्यक्तिको भावना नियन्त्रण राख्न जरुरी छ । त्यसैले यसको अर्को विकल्प भनेको संगीत सुन्दै मेडिटेसन गर्नु हो । किनभने संगीतले दिमाखको रसायिनिक उतार चडावलाई सन्तुलिन राखेर भावनात्मक रुपमा नियन्त्रण गर्दछ ।
राम्ररी निन्द्रा लाग्छ , अधिकांश मानिसहरुलाई निन्द्रा नलाग्ने समस्या हुन्छ । यसको मुख्य कारण मानिस मानसिक रुपमा स्वास्थ्य नहुनु हो । त्यसका लागी मानिसहरुले मेडिटेसन गर्दछन् । किनभने मेडिटेसनले निन्द्रा लगाउन मदत गर्दछ । अझ मेडिटेसनको साथमा संगीत सुन्यो भने मानसिक रुपमा स्वस्थ्य भएर राम्ररी निन्द्रा लगाउँछ ।
छविराजको चौथो विवाह पनि पर्यो धरापमा, शिल्पाले दिइन् घरेलु हिंसाको उजुरी
सिडी विजय अधिकारीको नयाँ गीत ‘प्रेमको तिर्खा’ सार्वजनिक (भिडियो)
लाइन बहादुर लिम्बुको ‘मायाको जालमा ’ विपिन र परिक्षाको अभिनय (भिडियो)
‘विक्रम वेदा’ को हिन्दी रिमेक बन्दै , फिल्ममा आमिर र सैफ अली
‘धुर्मुस सुन्तली’को फिल्म ‘सेन्टी भाइरस’ को छायांकन पूरा
स्वाद मात्र होइन् औषधीय गुण भएको भुइँकटहर खानुको यस्ता छन् ७ फाइदाहरु
रगतको सफाई, पाइल्स लगायत यी ४ समस्याको उपचारमा नीमको फल !
स्वाद मात्र होइन् ,औषधीय गुण भएको बेल खानुको यस्ता छन् ६ फाइदाहरु
प्रोटिनको कमी माछामासु भन्दा पनि यी ५ शाकाहारी खानाले पूरा गर्छ !
चलचित्र‘प्रेम संसार’ को गीत ‘सुन सुन चम्पा’ मा बुगी बुगी बिजेता कविता (भिडियो)
नेपाल आइडलका विक्रम बरालको नयाँ गीत ‘ढाक्यो मायाले’ मा सम्झना र निराजनको रोमान्स (भिडियो)